Paikady 4 hanamafisana ny loza mety hitranga amin'ny fanaovana hosoka amin'ny tsindry tampoka | Martech Zone
Paikady 4 hanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny fanaovana hosoka amin'ny tsindry ataon'ny mpangalatra
Alakamisy Oktobra Oktobra 22, 2015 Zoma, Oktobra 23, 2015 Douglas Karr
Ny fanaovana dokambarotra nomerika dia mety ho ny fandaniana amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny 2016 araka ny comscore. Izany koa no mahatonga azy io ho lasibatra tsy hay tohaina ho an'ny hosoka amin'ny tsindry. Raha ny marina, araka ny tatitra vaovao momba ny hosoka amin'ny indostrian'ny dokambarotra an-tserasera, ny ampahatelon'ny fandaniana amin'ny doka rehetra dia ho very amin'ny fisolokiana.
Distil Networks ary ny Birao fanaovana dokambarotra mifandraika Navoaka i (IAB) Torolàlana an'ny mpanonta nomerika amin'ny fandrefesana sy fanalefahana ny fivezivezena amin'ny bot, tatitra iray izay mandinika ny olan'ny hosoka amin'ny doka nomerika ankehitriny.
Kitiho key Finday hosoka
75% ny mpanonta ary 59% ny mpanao dokam-barotra no tsy mahay mamantatra ny fivezivezena ataon'olona sy tsy olona.
Mitongilana Analytics (50%) sy fisorohana anarana ary fisoratana anarana sandoka (32%) dia olana lehibe ihany koa tsy fifamoivoizana ho an'ny mpitory sy ny mpanao dokam-barotra.
Ny fisolokiana amin'ny tsindry sy ny fahatsapana dia ny olana lehibe indrindra ho an'ny mpitory (86%) sy ny mpanao dokambarotra (100%) raha ny olan'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala no resahina.
Ity tatitra ity dia lalina tokoa ary mandeha amin'ny mpamoaka sy dokam-barotra amin'ny alàlan'ny fomba fiasan'ny hosoka amin'ny tsindry ary koa paikady hanalefaka ny risika, ao anatin'izany:
Performance - Aza mifantoka firy amin'ny isa manta ary bebe kokoa amin'ny hetsika azo jerena. Ampidiro ireo mari-pahaizana momba ny fampiroboroboana ny maso ivoho mba hiantohana ny vokatra ara-barotra kalitao.
Aza miraharaha ny fomba fijery - Ny fahitana ny fahitana azy dia mora volavolain'ny bototra sy fifamoivoizana tsy an'olombelona hafa.
Quality - Tetibola ho an'ny kalitao fa tsy habetsahana. Omeo vola lavitra ny tranokala lava-rambony amin'ny fifanakalozana doka, izay manjaka ny fisolokiana ary mividy lisitra amin'ny tranokala be mpampiasa.
Mangataka mangarahara - Raha tsy afaka mampiseho anao ny toerana misy ny dokam-barotra ny masoivohonao na ny mpamatsy entana
nisy ny fahatsapana fa aza ampiasaina.
Sintomy ny torolàlana an'ny mpampanonta nomerika amin'ny fandrefesana sy fanalefahana ny fivezivezena amin'ny bot
Tags: fanaovana hosoka amin'ny dokam-barotraFikambanan'ny maso ivoho amerikaninaANAFikambanan'ny mpanao dokam-barotra nasionalytsindrio hosokaDistil NetworksIABBirao fanaovana dokambarotra mifandraikafivezivezena tsy an'olombelonametytenifototravondrona mahatoky azo itokisana
Termografia momba ny typography: Apex mba hilomano ary ny Gadzook eo anelanelany
Indostria 5 novaina tanteraka tamin'ny alàlan'ny Internet
29 Okt 2015 amin'ny 7:25 PM
Salama Douglas- ilay lahatsoratra dia manarona tsara ny lohahevitra hosoka amin'ny tsindry, saingy tsy manome vahaolana tena izy, satria mety tsy iharan'ny fifamoivoizana amin'ny bot hatrany ny tsindry bokotra. Ny hevitra iray dia tokony hitandrina tsara amin'ireo toe-javatra mifandraika amin'ny fikendrena geo (toy ireo eo ambanin'ny + Safidy mandroso). Ary koa, mampiasa rindrambaiko natokana, toa http://www.xionagrup.ro mety ho idealy tsara, na mampiasa parsers hazo mihitsy aza mba hahitana hoe inona ny IP na kilasy manindry ny doka nataonao.